China CoSee Anti-Fog Glasses မှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူအတွက်မှန်ဘီလူးသန့်ရှင်းသောအရည်ဖြေရှင်းချက် Defogger မှုတ်ဆေး | Co-See
မျက်မှန်၊ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်၊ မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်၊
စက္ကူသေတ္တာထဲမှာပုလင်း ၂၅ ခု၊ ပုံးထဲရှိစက္ကူပုံး ၁၂ လုံး၊ ပုံးထဲရှိပုလင်း ၃၀၀ (စံတင်ပို့ပုံး)
Anti-fog Principle အားသုံးသပ်ခြင်း -
Anti-fogging အေးဂျင့်နှင့်ရေမျက်ရည်စက်လေးတွေ။ ရေမျက်နှာပြင်တင်းမာမှုကိုလျှော့ချပါ။
Anti-fog သည် goggles မှမှန်များသို့မဟုတ် custom made protection အတွက်မည်သည့်မျက်နှာနှင့်မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားအတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးချသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်မှန်ဘီလူးများပေါ်မှမြူခိုးများထဲမှငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကိုရပ်တန့်စေပြီးပါးလွှာသောအကာအကွယ်တစ်ခုထားခဲ့လိမ့်မည်။ Co-See Anti-Fog ရေမှုန်ရေမွှားသည်အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးသန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည့်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများဖြစ်သည်။
1. Customized အမှတ်တံဆိပ်
4. Customization ပုံစံများ
1.Bottle ထုတ်လုပ်မှု - အရည်ဖြည့်ပါ
Wuxi Co-See Packing Co. , Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမှန်ဘီလူးအ ၀ တ်အထည်၊ မှန်ဘီလူးသန့်ရှင်းရေးမှုန်ရေမွှားနှင့်အခြားမျက်မှန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ မည်သည့် Optical လိုအပ်ချက်များအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသော optical စတိုးများနှင့် optometry စင်တာများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒီလယ်ပြင်၌ FDA၊ ISO စသည် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှင့်အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုတို့ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိစျေးကွက်အတွက်အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စောင့်ရှောက်ကြပါစို့။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်အကြီးစား PC Frame Pilot Nose Bridge Hollow-out နေကာမျက်မှန်
အကြမ်းခံ Multi-Colours အကောင်းဆုံး Microfiber မှန်ဘီလူး ...